Ahoana ny fisafidianana niche bilaogy - Victor Mochere
Ny fisafidianana niche bilaogy dia na ny mora indrindra na ny sarotra indrindra amin'ny fanombohana ny blôginao. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mifidy niche izay azonao antsoina hoe manam-pahefana - ny fahadisoana lehibe indrindra ataon'ny bilaogera vaovao amin'ny tontolon'ny bilaogy feno olona toy izany dia ny fanombohana bilaogy nefa tsy manandrana manao zavatra mahagaga na hafa. Ohatra, raha tianao ny lamaody, raha tokony hampifangaro votoaty lamaody mahazatra ianao, dia azonao atao ny mampifangaro ny fitiavanao akanjo sy ny fiahianao lehibe amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fitorahana bilaogy momba ny mpamorona mitsinjo ny tontolo iainana.
Ireto ny fomba tsara indrindra hahitana niche ho an'ny blôginao vaovao.
1. Jereo ny bilaogy hafa
2. Ampiasao ny Google
3. Fikarohana forum momba ny FAQ mahazatra
4. Araho ny fironana ankehitriny
5. Mieritrereta karazana votoaty samihafa
6. Fantaro ny tombontsoanao sy ny filanao manokana
Ity no tokony ho seranan-tsambo voalohany. Inona no efa tafita? Ary ny tena zava-dehibe, inona no tsy ampy? Tadiavo ny banga eo amin'ny tsena.
Inona no tadiavin'ny olona? Mampiasà fikarohana soso-kevitra Google ary fenoy mandeha ho azy mba hahitana izay tadiavin'ny olona - raha mitady izany izy ireo dia midika izany fa misy fangatahana.
Rehefa tsy mahita valiny amin'ny fanontaniany ny olona dia mandeha any amin'ny forum izy ireo. Inona no anontanian'izy ireo? Inona no ilain'izy ireo torohevitra? Izany dia hampiseho ny zavatra mahaliana ny olona sy ny tsy fahampian'ny fampahalalana azo alaina.
Inona no lohahevitra ao amin'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao? Tsara ny mifidy lohahevitra iray maharitra ela, fa raha afaka mihemotra amin'ny fironana aloha ianao dia afaka manangana haingana ny tenanao ho manam-pahaizana momba izany alohan'ny olon-kafa. Ny fikarohana #journorequest ao amin'ny Twitter dia mampiseho ny karazana lohahevitra taterin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao.
Afaka manao torolalana / toro-lalana ve ianao? Hevitra? Dinidinika? Lisitra? Mety tsy ny zavatra soratanao, fa ny fomba fanoratanao no mampiavaka anao.
Na dia manan-danja aza ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, dia tsy misy dikany ny mibilaogy momba ny zavatra tsy mahaliana anao. Ho leo haingana ianao ary ho hitan'ny olona ny tsy fahampian'ny hafanam-ponao. Manorata zavatra tena tianao.
Fihetseham-po amin'ny poker
Ny eritreritro, amin'ity tsingerintaonako ity